Sales Admin Archives - Glory Assumption Space
Sales Admin Staff - Female - (5) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
၁) Sales Admin Staff - Female - (5) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ Job Requirements •	Previous experience asaSales Administrator or Sales support •	Bachelor’s degree or certifications in Sales or other relevant fields •	Understanding of sales performance metrics and process •	Hands-on and proficient experience with MIT Software and Microsoft Office (MS Excel and MS PowerPoint in particular) •	Excellent verbal and written communication skills •	Excellent organizational and multi-tasking skills •	Ability to work under strict deadlines •	Ability to coordinate and work in teams •	Ability to travel locally •	Office Hour – 8:30 AM to 4:30 PM •	Off Day - Sunday & Gazette Holiday Off GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (ဘုရင့်နောင်) ။
1.	Sales Admin – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (ဘုရင့်နောင်) ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းဌာန စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	English ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ပြီး CRM/ ERP System အသုံးပြုဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။ •	အရောင်းနှင့် ဆိုင်သော စာရင်း ၊ ဇယား ၊ Report များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ •	လမ်းစရိတ်နှင့် ထမင်းဖိုး စီစဉ်ပေးပါမည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ စားအုန်းဆီဖြန့်ချီသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ စားအုန်းဆီဖြန့်ချီသည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 263121101 ,09- 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09977397705 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales Admin – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
၁) Sales Admin – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရ ( သို့မဟုတ် ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level 1,2,3 တက်ထားသူ ၊ MYOB Software , Computer , Excel ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရပါမည် ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ် ၀န်းကျင် ရှိရမည် ။ • နေ့လည်စာ ကျွေးပါသည် ။ • ဖယ်ရီ ၊ ယူနီဖောင်း ရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော ကလေး အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales Admin - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။
၁) Sales Admin - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • Computer Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈:၃၀ ) မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) အထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Car Service Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Car Service Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin - Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales Admin - Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • MYOB Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ • Computer Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈:၀၀ ) မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) • စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • ဖယ်ရီ၊ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Baby Product Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Baby Product Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin - Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Sales Admin – Female - (5) Posts
၁) Sales Admin – Female - (5) Posts / လစာ - ၁၃၀,၀၀၀ ကျပ် + OT / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းပိုင်းနားလည်သူဦးစားပေးမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ် တွင်ရှိသော Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin – Female - (5) Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
Salary Rang : 000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Promotion Item များကို Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales Admin – Female - (5) Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာ (Microsoft Word, Excel, Power Point, Email) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Sales Admin ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ B2B ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစား ပေးမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအများနှင့်လိုက်လျော ညီထွေ စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာအသင့်အတင့်နားလည်အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Admin – Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Admin – Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Computer Word,Excel ,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Sales Admin ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အရောင်းပိုင်းသဘောတရားနားလည်ရမည်။
-Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin – Male / Female (5) posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁။Sales Admin – Male / Female (5) posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / လမ်းမတော်မြို့နယ် - ၁၀တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - ရောင်းထားတဲ့ဆိုင်တွေ follow up လုပ်နိုင်ရမည်။ - အရောင်းများစီစစ်နိုင်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်မုန့်ပိုင်းအတွေ့ကြုံရှိရမည်။ - ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သွက်လက်ချက်ချာရမည်။ - အသက် ၂၈ - ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM to 5:30 PM) - Uniform ပေးမည်။ - တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com
Phone Number - 09 977397705 , 09- 263121101 , 09 262223785, 09262223784
Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 ,
ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin – Female (5) posts
###### ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည် ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အရက်ချက်စက်ရုံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1 ။ Sales Admin – Female (5) posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်သက် ( ၂ / ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ - Excel ပိုင်းကျွမ်းကျင် ၊ စာရင်းဇယားပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ( ၃၅ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် ( 8:00 AM to 5:00 PM) - တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
Sales Admin – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
3.Sales Admin – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လမ်းမတော်မြို့နယ် ။ - ၁၀ တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းဖြစ်ရမည် ။ -အသက် ၂၈-၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ -Computer ရရမည် ။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည် ။ - သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် ရှိရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
Location in : South Dagon
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Sales Admin – Female (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Admin - Male /Female ( 5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Admin - Male /Female ( 5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ Business Excel, Microsoft Word , Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Sale Admin လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၃)နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ အသက် ( ၂၆ ) နှစ် မှ ( ၂၈ )နှစ် အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။ Personality & Communication ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်းလိုက်နာ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် အချိန်ပိုဆင်းနိုင် သူဖြစ်ရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ပါကြော်ငြာထားသော ရာထူးအားလုံး အနည်းဆုံး (၆)လ လုပ်နိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။အလုပ်ချိန် မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၆)နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင် ရမည်။ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ဖယ်ရီမရှိပါ။ယူနီဖောင်းစီစဉ်ပေးသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Location in : Okkalapa South
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Material Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Admin – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - Computer (Word,Excel ,Internet & Email ) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )